ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဟိုက်အေ့များ | တိုယိုတာဟိုက်အေ့ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Toyota HiAce 16 Seater GL 2017 (+Tax)
Toyota Hiace 16Seaters GL 2017 selling price at USD 40,400 at exchange rate 1370 MMK + Tax.Price can be changed due to exchange rate.Transmission Type : 4-speed automatic transmissionBreaks : Ven...
Toyota HiAce Lexury Wagon 2017 (+Tax)
Toyota Hiace Lexury Wagon 2017 selling price at USD 47,200 at exchange rate 1370 MMK + Tax.Price can be changed due to exchange rate.Engine :2TR-FE, 2.7L Petrol (Compact Twin cam EFI)Transmissi...
Toyota HiAce 15 Seater 2003
Pearl White Toyota HiAce 15 Seater 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
Silver Toyota Hiace 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pas...
pearl white Toyota Hiace 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...
Toyota Hiace Super Custom 2006
Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airb...
Pearl White Toyota Hiace 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...
Toyota HiAce Super Custom 1997
Gold Toyota HiAce Super Custom 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...
Gold Toyota HiAce Super Custom 1995 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Air...
Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airb...
Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 1995 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: D...
Pearl gold Toyota Hiace 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: ...
Toyota Hiace Super Custom 1996
Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 1996 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: D...
Pearl white Toyota Hiace 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Dri...
Aung Gabar Motor
Dark Green Toyota HiAce 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
Toyota HiAce 10 Seater 2005
Pearl White Toyota HiAce 10 Seater 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
White Toyota Hiace 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pas...
White Toyota Hiace 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pas...
Pearl gold Toyota Hiace 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
Silver Toyota Hiace 1996 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...
white Toyota Hiace 2011 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear,TV. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger,Airbag: Side. The windows are Power Windows.T...
တိုယိုတာ ဟိုက်အေ့စ်များဟာ ပေါ့ပါးတဲ့ ကော်မားရှယ် ယာဉ်တွေထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဌင်းကို ဗန်ကား အပြည့်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ လူအနည်းဆုံး ၈ ယောက်လောက်ကနေ အများဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားအမျိုးအစား မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ၁၅ ယောက်လောက်ထိ စီးနင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဌင်းယာဉ် အမျိုးအစားများကို ခရီးတိုတွေနဲ့ မြို့တွင်း ကုမ္ပဏီ၊ ရုံး ၀န်ထမ်း ပို့ဆောင်ရေးတွေမှာ အသုံးပြုနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာက မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစား တော်တော်များများကို ထုတ်သလို ခုလို ကားအမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ကလူးဂျာ နှင့် ဆီရီးနာ တွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဟိုက်အေ့ ဂရန် ကဘင်းတွေကို အသုံးများပြီး ဟိုက်အေ့စ် ကန်စတန်ကားလေးတွေလည်း အသုံးများပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်နဲ့ ဌင်းနှစ်ရဲ့ အရင်မှာ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၄၀၀ စီစီ၊ ၂၈၀၀ စီစီ၊ ၃၄၀၀ စီစီတို့ကို ထုတ်ပါတယ်။ ယင်းနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ မော်ဒယ်ကားတွေကတော့ ခေါင်းနိမ့်တွေ ဖြစ်သွားပြီး မော်ဒယ် အားဖြင့် ၂၀၁၁ မှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကတော့ ၂၀၀၀ စီစီကနေ ၃၀၀၀ စီစီ ထိ ကို အစားစား ရှိပါတယ်။ အော်တို မန်နျှုးယယ် ဂီယာတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၅၀၀ စီစီ နဲ့ ၃၀၀၀ စီစီ မှာ တာဗို့ ဒီဇယ်ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၇ ဟိုက်အေ့စ်တွေရဲ့ နည်းပညာပိုင်းကို ဖော်ပြရသော် နောက်ဘီးယက်ကားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဟိုက်အေ့စ်ကားတွေမှာ ၁၆ ဗီရှိတဲ့ ဆလင်ဒါ လေးလုံပါ ၂၅၀၀ စီစီ ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်တွေနဲ့ ပြေးနေတာ ဖြစ်ပြီး အော်တို ဘ၇ိတ် စနစ်တွေကို စတန်ဒန် အနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်က ၂.၈ တန်နဲ့ ၃ တန်နီးပါးမှာ ရှိပါတယ်။
ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဖြစ်တဲ့ကားမော်ဒယ်တွေမှာ ပုံစံ ဒီဇိုင်း ဆန်းသစ်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၄ နဲ့ ဌင်းရှေ့ပိုင်း မော်ဒယ်တွေကိုပါ တွေ့ရပါမယ်။ ၂၀၀၆ ရုပ်ထွက်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်မြင့် ဂရမ်ကာဗင်တွေကို တွေ့ရပါမယ်။ ၂၀၀၄ နောက်ပိုင်းက အပြင်ဖက် ဒီဇိုင်းမှာ ပိုပြီး ရှင်းလင်းလာကာ ဒီဇိုင်းတိုးမြင့်ထားပါတယ်။ ကားအတွင်းပိုင်းက လူသယ်ဖို့ကို ဦးစားပေးလုပ်ထားတဲ့ အတွက် ဒတ်ရ်ှဘုတ်တွေကို သိပ်ကြီး အလေးပေးပြီး ဇိမ်ခံသဘောမျိုး လုပ်ပေးထားခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ ၂၀၁၄ ထုတ် ဟိုက်အေစ့် GL ဂရိတ်တွေဆို ဟန်းဂီယာတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ၁၅ ယောက်စီး ဟိုက်အေစ့်များ အနေနဲ့ လူထိုင်တဲ့ ခုံများအနေကို နောက်ဆုံးက လေးယောက်ထိုင် ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ခုံများကတော့ သုံးယောက်တန်းခုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်မြင့်တွေ ရှိသလို ခေါင် နိမ့်တွေ လည်း ရှိပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အနေနဲ့ နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့် ဟိုက်အေ့စ်တွေမှာ ဆလိုက်တံခါးတွေ ပါဝင်လာပြီး လေအိတ်၊ ခရီးသည် လေအိတ်၊ ပါဝါ ၀င်းဒိုး၊ ဒီဒီ ပလေးရာ အသံ စနစ်တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။
၀ယ်ယူရတဲ့ ကားရဲ့ ထင်ရှားမှု
တိုယိုတာ ဟိုက်အေ့တွေဟာ လူများများ စီးနိင်ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ မောင်းနှင်ရာတာ လွယ်တဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပြီး လူ ၁၂ ယောက်ကနေ ၁၅ ယောက်ထိ ထိုင်နိုင်လို့ အသုံးများပါတယ်။ ဆီစားလည်း သင့်လျော်ပြီး ၂၀၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ကနေ ၃၄၀၀ စီစီ ထိ စုံလင်စွာ ရနိုင်ပြီး ဒီဇယ်လည်း ရနိုင်တာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဌားယာဉ် လုပ်ငန်းစုတွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ကားအမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ဌင်းလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ ၂၅၀၀ စီစီနဲ့ ၃၀၀၀ စီစီဖြစ်တဲ့ တာဗို့ ဒီဇယ် တိုယိုတာ ဟိုက်အေ့တွေကို သုံးနေကြပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းမှာလည်း ထိုင်ခုံ များပေမဲ့လို့ ကျယ်ဝန်း လုံလောက်ပြီး ခေါင်းမြင့်ကားတွေမှာဆို တီဗီတွေပါ ထည့်သွင်းနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားဖူး လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ အဌားယာဉ် လုပ်ငန်းတွေမှာ အများဆုံး အသုံးပြုနေတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း ၀ယ်ယူမှု အနေနဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မော်ဒယ် အောက်ကနေ ၂၀၀၂ ၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ၊ ၂၀၁၄ စတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ နောက်ပိုင်းနဲ့ ၂၀၀၅ လောက်မှာ ပုံစံက ပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ခေါင်မြင့် ဟိုက်အေ့တွေကို လူပိုကြိုက်ကြပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကနေ ၂၅၀ သိန်း၊ ၂၆၀ လောက်ထိ ဈေးရှိပြီး ၂၀၀၆ GL ဂရိတ် ဟိုက်အေ့စ်တွေဆို ကျပ်သိန်း ၃၅၀ လောက်ရှိပြီး ၂၀၁၄ မော်ဒယ်တွေက ထိုထက်ပိုပြီး ဈေးမြောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကတော့ ဟိုက်အေ့တွေကို တစ်ပတ်ရစ် အ၀ယ်များပြီး အသစ်တွေ လှမ်းမှာ ယူမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဟိုက်အေ့တွေဟာ မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင် စီးနင်းမှုတွေ အတွက် အဆင်ပြေရုံသာမက ခရီးတိုနဲ့ ဘုရားဖူးခရီးတွေ အတွက် အဆင်ပြေလှတဲ့ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ဟိုက်အေ့တွေဟာ မြို့တွင်း မြို့ပြင် စီးနင်းမှုမှာ ဘတ်စ်ကား တစ်စီး မဟုတ်ပါပဲ။ လူတော်တော်များများ ကို သယ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ကားဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေလှတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ ပုံသဏ္ဍာန် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှု ရှိပေမဲ့ ပြည်တွင်း လူထု နှစ်သက်တဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေနဲ့လည်း လာတဲ့ကား တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည် ကြီးမားပေမဲ့လို့ ပေါ့ပါးပြီး မောင်းနှင်ရတာ အဆင်ပြေလှတယ် လို့ လူပြောများကြတဲ့ တိုယိုတာရဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။